यस वर्ष अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पाउने 'अक्सन थ्योरी' के हो?
नेपाल लाइभ शुक्रबार, कात्तिक ७, २०७७, ०६:५०
काठमाडौं-लिलाम बढाबढसम्बन्धी सिद्धान्त (अक्सन थ्योरी) लाई पुनर्परिभाषित तथा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित स्टानफोर्ड विश्व विद्यालयका दुई जना प्राध्यापकलाई यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइएको छ।
लिलाम बढाबढसम्बन्धी सिद्धान्तलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गर्न योगदान गरेको र यसको नयाँ फर्मुलासमेत पत्ता लगाएको भन्दै रोयल स्वीडिश एकेडेमी अफ साइन्सेसले दुई अर्थशास्त्रीहरू पाउल मिलग्रोम र रोबर्ट विल्सनलाई यो पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो। उनीहरूले ९० लाख स्वीडिश क्रोनर अर्थात् झन्डै १० लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार राशी बाँड्नेछन्।
पाउल र रोबर्टले स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयमा रहँदैको पछिल्लो करिब ३० वर्षअवघिमा अक्सन थ्योरीसँग सम्बन्धित खोज अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक काम गर्दै आएका थिए। विभिन्न प्रकारका वस्तु र सेवाको लिलाम बढाबढमा मूल्य निर्धारणको स्थितिले कसरी काम गर्छ? र लिलाम प्रकृयामा विगतदेखि चलिआएको बोलकबोल बढाबढको सिद्धान्तमा कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यी दुई अर्थशास्त्रीको अध्ययन केन्दित छ। लिलामीको पुरानो प्रारुपलाई पुनर्परिभाषित गर्ने र यससँग सम्बन्धित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर कार्यान्वनमा जोड दिने विषय नै समग्रमा यसवर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार पायो। उनीहरुले पत्ता लगाएको सिद्धान्तले वस्तु तथा सेवाको क्रेता, बिक्रेता र करदातासमेतलाई फाइदा पुग्नेगरी लिलाम प्रकृयाको नयाँ अवधारणालाई समेटेको रोयल स्वीडिस अकाडेमी अफ साईसेसले उल्लेख गरेको छ।
लिलामीहरूको लामो इतिहास छ। प्राचीन रोममा ऋणदाताहरूले ऋण तिर्न असमर्थ उधारो लिनेहरूबाट जफत गरेको सम्पत्ति बेच्न लिलामी अवधारणा प्रयोग गर्थे। विश्वको पहिलो लिलामी घर (अक्सन हाउस) का रुपमा सन् १६७४ मा स्वीडेनमा स्थापित स्टकहोम्स अक्सनभर्कलाई लिईन्छ।
सामान्य तरिकाले परिभाषित गर्दा कुनै डाँक बोलेर सबभन्दा बढी मोल दिने वा हद मोल बोल्नेबालालाई माल वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्ने काम लाई लिलामी भनिन्छ। हामी जब ‘लिलामी’ शब्द सुन्छौं, तब हामी सायद परम्परागत लिलामी तरिकामा जसमा उच्च मूल्य कबोल गर्नेले वस्तु तथा सेवा हात पार्ने प्रकृयाबारे आँकलन गर्छौ। यो प्रकृयामा बिक्रेताहरु सँधै उच्च बोलीदातालाई सामानहरू बेच्छन् वा सस्तो प्रस्ताव प्रदान गर्ने जोसुकैबाट उनीहरू खरीद गर्दछन् भन्ने बुझाई रहन्छ। तर अहिले 'न्यू अक्सन थ्योरी' का रुपमा नयाँ अवधारणालाई यी दुई अर्थशास्त्रीले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा परिभाषित गरेका छन्।
स्टानफोर्ड विश्वविद्यालयका यी दुई प्राध्यापकहरु पाउल र रोबर्टले मुख्यतः लिलामी प्रकृयासम्बन्धी नियम, त्यसको डिजाइन, बोली लगाउने व्यक्तिको व्यवहार र लिलामी नतिजाबारे अध्ययन गरेका थिए। जसमा लिलामी प्रकृयालाई नै कुनै पनि वस्तुको वास्तविक मूल्यको खोजी गर्न सकिने ठानिन्छ। उनीहरुका अनुसार लिलामीको नतिजा तीनवटा कारणबाट निर्भर रहन्छ। पहिलो–लिलामीको नियम, दोस्रो–लिलाम हुनेवाला वस्तु र सेवा र तेस्रो–अनिश्चितता।
लिलामीको नियम बोली लगाउने व्यक्तिको व्यवहारबाट प्रभावित हुन्छ। उदाहरणका लागि एउटा खुला लिमामी र अर्को बन्द लिलामी प्रकृया बाट लिलाम भईरहेको छ भने एउटै व्यक्तिको व्यवहार पनि ती दुई परिस्थितिमा फरक–फरक हुन जान्छ। त्यस्तै मूल्य कति निर्धारण हुन्छ भन्ने विषय लिलाम हुने वस्तु तथा सेवामा पनि निर्भर रहन्छ। आवस्यकता र अपरिहार्यता जोडिएको लिलाम हुने कुनै वस्तुमा बोली लगाउन सजिलो हुने ठानिन्छ। उदाहरणका लागि कुनै ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ को लिलामीका लागि त्यसको मूल्य र महत्व (भ्यालु) पत्ता लगाउन सजिजो हुन्छ। किनकि बोलकबोल गर्ने कम्पनीको उद्देश्य लगभग समान नै हुन्छ। जसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ‘कमन भ्यालु’भनिन्छ।
तर कुनै–कुनै वस्तुमा भने त्यसको मूल्यको अनुमान लगाउन त्यति सजिलो हुँदैन। उदाहरणका लागि कुनै पेन्टिङको लिलामी। कुनै व्यक्तिलाइै निकै मन परेको पेन्टिङ अर्को व्यक्तिलाई त्यति सार्‍हाे मन नपरेको पनि हुनसक्छ। जसकारण त्यसको मूल्य निर्धारणमा पनि फरक पर्न जान्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ‘प्राईभेट भ्यालु’वा ‘पर्सनल भ्यालु’भनिन्छ। यस्तो अवस्थामा वस्तुको मुल्य अनुमान गर्न निकै कठिन पर्न जान्छ। किनकि व्यक्तिले आफूलाई त्यो वस्तु वा सेवा मन परे–नपरेको आधारमा मूल्य अनुमान गरेको हुन्छ।
लिलाम प्रकृयाको अन्तिम कारक हो–अनिश्चितता। जुन बोली लगाउने व्यक्तिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको सूचनासँग जोडिएको हुन्छ। रोबर्ट विल्सनले कमन भ्यालुका साथ वस्तु तथा सेवाको लिलामीको सिद्धान्तलाई विकसित गरे। उनले ‘बिजेताको अभिशाप’(विनर्स कर्स) को विस्तृत ब्याख्या गर्दै यसले बोली (बिडिङ) प्रकृया कसरी प्रभावित गर्छ भन्ने पत्ता लगाए। 'विनर्स कर्स' लिलामी जित्ने त्यस्तो प्रवृत्ति हो, जसमा वस्तु तथा सेवाको वास्तविक मूल्यभन्दा अधिक मूल्य कबोलेर खरिद गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा बोली लगाउने व्यक्तिले लिलाम जितेपनि उसलाई हानी भएको हुन्छ। तर विल्सनको भनाईमा बोली लगाउने समझदार व्यक्तिहरु (र्‍यासनल बिडर्स) 'विनर्स कर्स' को भयका कारण आफ्नो अनुमानित मूल्य भन्दा कममै बोली लगाउँछन्।
अर्कोतर्फ मिल्ग्रोमले लिलामीको यस्तो ‘जनरल थ्योरी’प्रतिपादन गरे, जसले वस्तुको ‘कमन भ्यालु’लाईमात्र नभई ‘प्राइभेट भ्यालु’लाई पनि स्वीकfर गर्छ। यसका लागि मिल्ग्रोमले धेरैवटा ‘अक्सन फर्म्याट’मा बोली लगाउने रणनीति को विश्लेषण गरेका थिए। जसबाट उनको निश्कर्ष रह्यो, ‘यदि बोलकबोल प्रकृयाका दौरान बोली लगाउने व्यक्तिहरु एकअर्काको अनुमानित भ्यालु पत्ता लगाउँछन भने यस्तो खालको लिलामी प्रकृयामा बिक्रेतालाई पनि फाइदा पुग्छ। किनकि बोली लगाउने व्यक्तिहरुले अनुमानित मूल्य बढी कबोल गर्छन र बिक्रेतालाई बढी राजश्व हात पर्छ।’यसरी पाउल र रोबर्टको अक्सन थ्योरीमा विनर्स कोर्सले कमन भ्यालुलाई नियन्त्रण गर्ने र प्राईभेट भ्यालुमा बिक्रेता सँगसँग करको राजश्व पनि बढी हुने सिद्धान्त पत्ता लगाए।
माथि उदाहरणमा प्रयोग भएको रेडियो स्पेक्ट्रमको लिलामी बारे कुरा गर्दा परम्परागत प्रकृयाबाट जाने हो भने त्यसमा 'विनर्स कर्स'को सम्भावना बढी रहन्छ। जसमा क्रेताले नोक्सानी त ब्यहोर्छ नै, त्यसको नतिजामा पनि प्रभावकारिता कम रहन्छ भन्ने 'कन्पिरेसी थ्योरी' ले पनि ठाउँ पाएको देखिन्छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सीजस्ता अनेकौं अरु चिजवस्तुलाई परम्परागत तरिकामा बेच्न गाह्रो हुने ठानेरै वस्तु र सेवाहरूको लागि नयाँ लिलामी ढाँचा डिजाइन गरिएको हो।
लिलामी प्रकृयामा मूल्य विश्लेषण निकै गाह्रो हुन्छ। किनकि, बोलदाताहरू आफुसँग भएको सूचना र उपलब्ध जानकारीका आधारमा रणनीतिक व्यवहार गर्छन्। उनीहरुले आफुले के जानेका छन र अर्को बोलकबोलवालासँग त्यस विषयमा कति जानकारी छ? भन्ने कुराको सम्म विश्लेषण गर्दछन। यस्तो अवस्थामा रोबर्ट विल्सनले साझा मान अर्थात् ‘कमन भ्यालु’का साथ वस्तुको लिलामीका लागि यस्तो सिद्धान्तको विकास गरे। जसले ‘मूल्य पहिले नै अनिश्चित छ, तर अन्तमा सबैको लागि समान छ’ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गराउँछ। विल्सनको सिद्धान्तले भन्छ कि–तर्कसंगत बोलपत्रकर्ता (र्‍यासनल बिडर्स) हरूले साधारण मूल्यको आफ्नै उत्तम अनुमानभन्दा कम बोलपत्रहरू राख्छन् ताकि विनर्स कर्सबाट बँच्न सकियोस्।
समग्रमा भन्दा यो बोलकबोलसम्बन्धी नवप्रवर्तित गणितीय अवधारणा हो। दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अमेरिकी नियामकले पहिलोपटक सन् १९९४ मा बोलकबोलको यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गरेको थियो र अहिले विश्वव्यापी बनिसकेको छ। अक्सन थ्योरीलाई पश्चिमाहरुले १९८० को दशकमा गेम थ्रोरीका रुपमा पनि परिभाषित गरेको पाईन्छ। तर अहिले भने यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणको महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा स्थान पाईसकेको छ।